Paxil® (ပါဆေးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Paxil® (ပါဆေးလ်)
Paxil® (ပါဆေးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Paxil® (ပါဆေးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Paxil® (ပါဆေးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
စိတ်ကျခြင်း၊ ထိန်းမရအောင်လန့်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ဓမ္မတာမလာခင်အကြို ကျေနပ်မှုခေါင်းပါးကြောင့်ကြခြင်းရောဂါတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရတဲ့ဆီရိုတိုနင်ပမာဏ ညီမျှမှုကို ပြန်ထိန်းပေးပါတယ်။
Paxil® (ပါဆေးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆေးညွှန်းစာအတိုင်း အကုန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ြကိမ် မနက်ပိုင်းမှာ အစာနဲ့တွဲပြီးသို့ အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။ အစာနဲ့တွဲသောက်ခြင်းက မအီမသာဖြစ်ခြင်းကို လျော့စေပါတယ်။ ဆေးပြားတစ်ပြားလုံးကို မျိုချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျိတ်ခြင်း ၊ ဝါးစားခြင်း ၊ ပိုင်းခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ အရည်ပုံစံအနေနဲ့ဆိုရင် ပမာဏကိုမတိုင်းတာခင်မှာ အရင်ဆုံးလှုပ်ခါပေးသင့်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေမသက်သာခင် ၄ပတ်အသုံးပြုရနိုင်ပါတယ်။
Paxil® (ပါဆေးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
စိုထိုင်းဆရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးဝေး အခန်းအပူချိန်မှာထားသင့်အပါတယ်။ ဆေးမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရေချိုးခန်းရေခဲသေတ္တာစတာတွေထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သေချာသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ရေမြောင်းတွေအိမ်သာစတာတွေထဲကို ညွှန်ထားထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေ့ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင် သို့ ်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် သေချာစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ချလက်ချစွန့်ပစ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Paxil® (ပါဆေးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Paxil® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
pimozide or thioridazine တွေအသုံးပြုနေချိန်မှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
ငယ်ရွယ်သူအချို့မှာ ပထမဆုံးအသုံးပြုချိန်မှာ သတ်သေချင်တဲ့အတွေးမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်အခြေအနေတိုးတက်လာမလာသိနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်ဆီကို ပုံမှန်ပြသနေသင့်ပါတယ်။ သင့်မိသားစု သို့ အခြားအုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ လက္ခဏာတွေကို သတိပြုနေဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အသုံးပြုခြင်းက ပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်ပြဿနာ ၊ နှလုံးချို့ယွင်းခြင်းနဲ့ သင့်ကလေးကိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုရပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ကျဝေဒနာပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာကိုယ်ဝန်ရလာရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းအသိပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲနဲ့ ဆေးစသောက်တာတွေရပ်လိုက်တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ နို့ထဲကိုဝင်သွားပြီး သင့်ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ်ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးအသုံးပြုနေချိန်မှာ နို့မတိုက်သင့်ပါဘူး။ အသက်၁၈နှစ်အောက်အရွယ်တွေမှာ ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Paxil® (ပါဆေးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Paxil® (ပါဆေးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အတွေးများယောက်ယက်ခတ်နေခြင်းပြေးနေခြင်း၊ အိပ်ဖို့သိပ်မလိုတော့ခြင်း၊ ထူးဆန်းတဲ့အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်များ၊ အလွန်အမင်းဝမ်းသာခြင်း ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အရင်ထက်ပိုစကားများခြင်း
အမြင်ဝါးခြင်း၊ အမြင်ကျဉ်းခြင်း၊ မျက်လုံးနာခြင်းရောင်ခြင်း၊ အလင်းစက်ဝန်းများမြင်ခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အရိုးနာခြင်း၊ အထိမခံအောင်နာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း ၊ပေါက်ပြဲခြင်း
အလွယ်တကုူပေါက်ပြဲလွယ်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟူတ်ဘဲသွေးထွက်ခြင်း ( နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ ယောနိလမ်းကြောင်း ၊ စအို) သွေးချောင်းဆိုးခြင်းအန်ခြင်း
ဆီရိုတိုနင်ကိုယ်တွင်းပမာဏများခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ ထင်ယောင်ထငိမှားဖြစ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုများလွန်ကဲခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဆက်စပ်နိုင်မှုမဲ့ခြင်း၊ ဖျော့တော့ခြင်း
ကိုယ်တွင်းဆိုဒီယမ်ပမာဏနည်းခြင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ စကားမပီခြင်း၊ အလွန်အမင်းအားနည်းခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်ခြင်း
ပြင်းထန်တဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ ကြွက်သားများအလွန်အမင်းတောင့်တင်းနေခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းမည်ီခြင်း၊ တုန်ခြင်း၊
ပြင်းထန်တဲ့အရေပြားဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ– ဖျားခြင်း၊ လည်ချေင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာလျှာရောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးပူခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်း၊ အနီရောင်အပြာရောင်အဖိမ့်များပျံ့နှံခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာသို့ ကိုယ်အထက်ပိုင်း) ပေါက်ပြဲငြခ်း အရေပြားကွာကျခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Paxil® (ပါဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cimetidine (Tagamet), St. John’s wort, tamoxifen, tryptophan (sometimes called L-tryptophan), warfarin (Coumadin, Jantoven)
Heart rhythm medicine နှလုံးခုန်ဆိုင်ရာဆေးများ
Certain medicines to treat narcolepsy နေ့ဘက်လှုပ်ရှားသွားလာနေချိန် ရုတ်တရက်အိပ်ပျော်သွားခြင်းရောဂါ or ADHD – amphetamine, atomoxetine, dextroamphetamine, Adderall, Dexedrine, Evekeo, Vyvanse, and others
အနာသက်သာဆေး Narcotic pain medicine – fentanyl, tramadol
စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားချက်အပြောင်းအလဲ၊ အတွေးမူမမှန်ခြင်း သို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာခြင်း – buspirone, lithium, other antidepressants, or antipsychotics ကဲ့သို့သောဆေးများ
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း Migraine headache medicine – sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan, and others
စိတ်ကြွခြင်း Seizure medicine – phenobarbital, phenytoin
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Paxil® (ပါဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
အရက်က မူးဝေခြင်း၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ရခက်ခြင်းစတဲ့ အာရုံကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ တွေးခေါ်ခြင်းတွေစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေမှာလည်း အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆေးအသုံးပြုနေစဉ်မှာ အရက်ရှောင်ခြင်း လျှော့သေက်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်သက်ရာက်မှုတွေကြောင့် ဆေးအာနိသင်ပြောင်းသွားတာတွေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုများလာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆေးအသုံးမပြုခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးုဆက်တွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Paxil® (ပါဆေးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Paxil® (ပါဆေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့အစာမပါဘဲ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် သူ့ချည်းသက်သသက်အသုံးပြုနိုင်သင့်တယ်။ အစောပိုင်းလက္ခဏာသက်သာဖို့ ပမာဏ- 20 mg/day
စိတ်ကျရောဂါအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြးနိုငိဖို့ 20 to 50 mg/day အတွင်း စမ်းသပ်သုံးကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက် သို့ တစ်စုံတစ်ခုကို တမ်းတမ်းစွဲစြဖ်နေခြင်းရောဝါ
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့အစာမပါဘဲ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် သူ့ချည်းသက်သသက်အသုံးပြုနိုင်သင့်တယ်။့ ပမာဏ- 40 mgနေ့စဉ်
20 mg/dayနဲ့စအသုံးပြုသင့်ပြီး 10-mg/dayတိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့အစာမပါဘဲ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် သူ့ချည်းသက်သသက်အသုံးပြုနိုင်သင့်တယ်။ အဓိကအသုံးပြုသင်သည့် ပမာဏ- 40 mg/day
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့အစာမပါဘဲ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် သူ့ချည်းသက်သသက်အသုံးပြုနိုင်သင့်တယ်။ အစောပိုင်းအသုံးပြုသင်သည့် ပမာဏ- 40 mg/day
အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြးနိုငိဖို့ 20 to 60 mg/day အတွင်း စမ်းသပ်သုံးကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့အစာမပါဘဲ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် သူ့ချည်းသက်သသက်အသုံးပြုနိုင်သင့်တယ်။ အစောပိုင်းအသုံးပြုသင်သည့် ပမာဏနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောပမာဏ- 20 mg/day အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြးနိုငိဖို့ 20 to 50mg/day အတွင်း စမ်းသပ်သုံးကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
အစာနဲ့တွဲပြီး သို့အစာမပါဘဲ မနက်ပိုင်းနေ့စဉ် သူ့ချည်းသက်သသက်အသုံးပြုနိုင်သင့်တယ်။ အစောပိုင်းအသုံးပြုသင်သည့် ပမာဏနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောပမာဏ- 20 mg/day
ကလေးတွေအတွက် Paxil® (ပါဆေးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Paxil® (ပါဆေးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးပြား ဖလင်အုပ်ထားသော အမှုန်ပါအရည်သောက်ဆေးပုံစံ paroxetine hydrochloride hemihydrate 10mg
Paxil. https://www.drugs.com/paxil.html. Accessed July 20, 2017
Paxil CR. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-32900/paxil-cr-oral/details#interactions. Accessed July 20, 2017